Iseyili yentsimbi kwalenza, Zm Steel Ikhoyili, Aluminized Steel Ikhoyili - Zhanzhi
Njengamashishini ezinto zentsimbi e-China akhokela amashishini, urhwebo lwesinyithi kunye nokuhanjiswa kwezinto "Amakhulu amashishini okholo olungileyo", amashishini orhwebo lwentsimbi e China, "Amashishini abucala ayi-100 aphezulu eShanghai".
Iimveliso zethu inxaxheba koomatshini processing, ubunjineli isakhiwo sentsimbi, ukhuselo lokusingqongileyo, izixhobo izixhobo, ubunjineli amandla ombane, imoto, ukwakha iinqanawa kunye namanye amashishini.
Ukulungiswa kunye nokuhanjiswa kwentsimbi
Ukwenzela ukubonelela ngcono ngokuma kokuma kwentsimbi, ukugcinwa, ukuhanjiswa kweenkonzo kubathengi, inkampani iseke indawo yokuhambisa kunye nokusasaza eShanghai, eQuanzhou, ukuhlangabezana neemfuno zamaqela abathengi ahlukeneyo.
Izinto zentsimbi kunye nezinto zokubasa
Ukunyuka kweshishini lezinyithi kunye nokwandiswa kwezinto zentsimbi kunye nezinto zeshishini, inkampani yethu iseke izinto ezizinzileyo zentsimbi kunye nesiseko sokuhambisa amafutha.
Ukuthengiswa kwezindlu kunye notyalo mali
Inkampani yethu ivelisa indawo yophuhliso olwahlukeneyo kushishino lwentsimbi, ibandakanyeka kuphuhliso lwezindlu nomhlaba, ishishini lotyalo mali.
I-Shanghai Zhanzhi Industry Group Co., Ltd., eyasekwa ekuqaleni kweminyaka yama-1980, ebekwe kwiSithili saseYangpu saseShanghai, liqela elikhulu kakhulu, elidibanisa urhwebo lwentsimbi, ukuqhuba kunye nokusasaza isinyithi, izinto zentsimbi ekrwada, uphuhliso lwezindlu nomhlaba, utyalo mali kunye namanye amashishini. Idolophu enkulu ebhalisiweyo yi-200 yezigidi ze-RMB ...
Iqela le-Zhanzhi e-Guangdong, e-Fuzhou, e-Xiamen, e-Chengdu, e-Chongqing, e-Shanxi, e-Tianjin, e-Liaoning, e-Lanzhou, e-Wuxi nakwezinye iindawo ezimisela iinkampani ezi-13 ezixhasayo, inabasebenzi abangaphezulu kwe-1000, ukuthengiswa konyaka kweemveliso zentsimbi zeetoni ezingaphezulu kwe-3.5million .. .
Ulawulo lweklasi yokuqala, uqeqesho lweqela lokuqala, ulwela umgangatho weklasi yokuqala, ukufezekisa izibonelelo zodidi lokuqala.
Umbala oBomvu Ubotshwe ngePPGI yentsimbi ...
Z275 Isefu Steel Ikhoyili ...
Bamba izandla, masihambe kunye Ngo-Epreli, iTianjin igcwele intwasahlobo, amafu alula kunye nomoya opholileyo. Kule ntwasahlobo, zonke izinto ziyavuseleleka, samkela ikota yethu yokuqala yeTianjin Zhanzhi ye-2021 Dongli Lake ye-12-kilometre yokuhamba ngomsebenzi wokwakha iqela. Ngo-8: 30 kusasa ngoMgqibelo, ...
Ingxelo yoNyaka yeNkomfa yoLawulo ye-2021 yeQela leZhanzhi Ingxelo yonyaka ye-2021 yeZhanzhi yeQela yeShishini ibibanjelwe eSanjia Port, ePudong New Area, eShanghai ukusukela ngomhla wama-25 ukuya kowama-28. Abantu abangama-54 kubandakanya abaphathi bamaqela, abaphathi ngokubanzi benkxaso-mali, kunye nabaphathi besebe kwikomkhulu ...